हामी, दिलशोभा र हाम्रा अखबारहरू
तस्वीर श्रोतः द मेटा पिक्चर
हुन त मान्छेहरु यसमा राज्यको भूमिका जिम्मेवार देख्दछन् । तर यथार्थ के हो भने हाम्रो राज्य कहिल्यै पनि कुनै पनि विषयमा उति जिम्मेवार भएर लागेन । यो तीतो यथार्थ हो । राज्य जिम्मेवार हुन्थ्यो भने किन पुष्पा बस्नेतले आफ्नो युवा उमेर जेलमा परेका अभिभावकहरुका नानीबाबुहरुलाई उद्धार गर्दैमा बलि दिनुपथ्र्यो ? किन अनुराधा कोइरालाले आफ्नो सम्पूर्ण जोवन सीमामा बेचिन लागेका नादान नेपाली चेलीहरूको उद्धारका लागि व्यतित गर्नु पथ्र्यो ? किन सडक बालबालिका उद्धारका बहानामा सयौं होडिङ बोर्डहरू हाम्रा शहरहरुमा झुन्डिन्थे होला ? किन हजारौ प्रतिवेदन तयार पारिन्थे होला ? किन डलरको खेती यस्तरी मौलाउथ्यो होला र ? अनि फेरि सरकारकै भूमिका जिम्मेवार देख्नेहरुको रुवाई चर्को छ – दिलशोभाको बदनाम गर्नलाई ! के अब कुनै पनि ब्यक्तिको देवत्वकरण र राक्षसीकरण मिडियामा उसका बारेमा आउने खबरहरुले नै निर्धारण गर्ने हुन ? के ब्यक्ति कति जायज वा नाजायज छ भन्ने तथ्यको निक्र्याैल उसको कर्मले निर्धारण नगर्ने नै हो त ?
ब्यक्ति, घटना, वा विषयवस्तुका बारेमा गहिरो खोज नगरी किन हावादारी पत्रकारीता गरिरहेछन् हाम्रा पत्रकारबन्धुहरु ? किन ९० लाख नभेट्टाइकनै अनुजाहरू राष्ट्राध्यक्षको बधाई पाउँछन् ? किन सबभन्दा पहिले न्यूज ब्रेक गर्ने प्रतिस्पर्धामा हाम्रा पत्रकार साथीहरु मिनेट–मिनेटमा एउटा जहाज हराएको, दुर्घटना भएको, विमानस्थलको टावरसँग सम्पर्क विच्छेद भएको खबरहरू सम्प्रेषण गर्छन् ? अनि किन पत्रकारहरु कुनै पनि विषयमा यति धेरै आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्दछन् ? प्रसंग दिलशोभाको मात्र हैन, यस्ता थुप्रै दिलशोभाहरु जन्माइएका छन्, अनि अवसान गराइएका छन् । एउटै व्यक्तिलाई यी कलम समात्नेहरु कहिले सम्मानको सगरमाथा चढाउँछन् त कहिले रछ्यानमा पुर्‍याउँछन् । कि पत्रकारीताका आफ्नै विशिष्ट मूल्य मान्यताहरु हुँदैनन् ? कि पत्रकारहरुलाई जे पनि लेख्न पाउने छुट छ ? के अनुसन्धान नै नभएका विषयहरुमा पत्रकारले यो वा त्यो भनेर प्रतिवेदन शैलीको समाचार लेख्न पाउने हो ? के हाम्रा मिडियाहरुलाई जिम्मेवार हुनु पर्दैन ?
पत्रकारको खोल ओढेर राजनैतिक दलका नेताहरुको चाकडी गर्ने, विभिन्न कुटनैतिक नियोगका ककटेल पार्टीमा गै देशको स्वाधिनता र सार्वभौमिकतालाई डलरसँग किनवेच गर्ने, तस्करी गर्ने, अपराधीहरुसँग साँठगाँठ गर्ने, मान्छेहरुका नितान्त ब्यक्तिगत कुराहरुमा अनावश्यक पहुँच पुर्‍याई उनीहरुको गल्तीबाट आर्थिक लाभ लिने पत्रकारहरुको ठूलो जत्था सक्रिय रहेको हाम्रो जस्तो देशका पत्रकारहरूबाट समाज परिवर्तन र राष्ट्रिय हितमा लागि परेकाहरूको विषयलाई पेचिलो तरिकाले उजागर गरी सारा नेपाली जनसमुदायमा सकारात्मक आशाको संचार गराउने खबरहरु अपेक्षा गर्नु बेकार हो ! यी हाम्रा मनोविज्ञानसँग खेलावाड गर्दै छन् । यी सधैं हामीभन्दा माथि पर्दै आएका छन् । यीनले हामीलाई बेच्न मिल्ने/नमिल्ने सबै खालका खबरहरु जबरजस्ती भिडाईरहेका छन् । हो, पत्रकारीताको धर्म, मूल्य र मान्यतालाई धोती लगाएर यीनले हामीलाई उल्लू बनाईराखेका छन् !